Barcelona iyo Real Madrid oo dheeli doona Spanish Supercopa ee sanadka bilawgiisa cusub . » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/Barcelona iyo Real Madrid oo dheeli doona Spanish Supercopa ee sanadka bilawgiisa cusub .
Barcelona iyo Real Madrid oo dheeli doona Spanish Supercopa ee sanadka bilawgiisa cusub .
Waxaa xaqiiqo ah in kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay dheeli doonaan laba kulan inta uusan bilaaban Horyaalka dalka Spain ee la liga Xili Cayaareedka soo socda 2017-2018.
Tababaraha kooxda Barcelona yeelan doonto oo ay u badan tahay in uu Noqon doono Ernesto Valverde ayaa Wajihi doona kulankiisa koowaad ee El Clasico kooxda Real Madrid Cayaar ka dhici doonta Magaalada Miami ee dalka mareekanka Kulankaas oola dheeli doono bisha July 29 keeda Waana mid ka mid ah kulamada kooxaha Caalamku dheelayaan Xiliga fasaxa.
Kulanka labaad ee El Clasico ayaa Noqon doona Spanish Supercopa maadaama labada kooxood kala qaadeen Horyaalka dalka La liga oo ay qaaday kooxda Real Madrid & Barcelona oo Xalay qaaday Copa del Rey sidaa daraadeed ayey u dheeli doonaan Kulan aad u adag ee El Clasico.
Markii isugu dambeysey ee Barcelona iyo Real Madrid dheelaan Spanish Supercopa Waxa ay ahayd Xili Cayaareedkii 2012-2013 Markaas oo ay labada kooxood kala wateen Pep Guardiola iyo Jose Mourinho waxaana Goolal tirsi ku qaaday Jose Mourinho.
Arsenal oo ku guuleysten koobka FA Cup markoodii 13-aad.
Neymar oo barbareeyay rikoor uu horay u dhigay halyeey kooxda Real Madrid.